Wasiirka Ganacsiga Oo Ku Eedeeyay Shirkadaha Korontada In Ay Jabiyeen Xeerkii Ganacsiga Xorta Ah | Somaliland.Org
Wasiirka Ganacsiga Oo Ku Eedeeyay Shirkadaha Korontada In Ay Jabiyeen Xeerkii Ganacsiga Xorta Ah
March 7, 2013	Hargaysa (Somaliland.Org) Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Somaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee adeega korontada siiya dadwaynaha ay jabiyeen xeerkii ganacsiga xorta ah ee Somaliland u yaalay. Isla markaana ay samaysteen ururo ay ku midoobeen halka uu sharciga ganacsiga xorta ah ee Somaliland uu dhigayo in shirkadaha laydhku ay si xor ah ugu tartamaan suuga.
Wasiirku waxa uu sidaasi ka sheegay mar uu ka qayb gelayay Barnaamijka Dooda Telefeeshinka Qaranka, taasi oo lagaga hadlayay dood ku saabsanayd qiimaha shidaalka ee mudooyinkan danbe ay qaaliyeeyeen shirkadaha shidaalka keenaa.Waxaana doodan ka qayb galay qaar ka mid ah Ganacsatada waa weyn ee shidalaka soo dajiya, Madaxda is-kashatooyinka laydhka iyo basaska.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Somaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed, ayaa sheegay in aanu jirin wax hor istaagaya ama diidaya in shirkaduhu ay xidhiidh la yeeshaan xukuumada bal se wixii sharci darro ah aan laga ogolaan doonin. isaga oo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi “Sherkaduhu in ay isu tagaan oo danahooda iyo xidhiidhka ay dawladda la leeyihiin cid u igmadaan mid aanu diidayno ma aha, laakiin wixii sharci darro ah mid aanu ka yeelayno ma aha”.
Md. Cabdirisaaq Khaliif Axmed, ayaa ku tilmaamay go’aanka ay shirkaduhu ku heshiiyeen ee ah in ay kordhiyaan qiimaha adeega laydhka ay tahay mid jabinaysa xeerka ganacsiga xorta ah isla markaana ay ka soo hor jeedo tartankii loogu talo galay ganacsiga. “Go’aanka ah inay si siman oo ay heshiis ay ku yihiin u kordhiyaan qiimaha adeega laydhka, taasi waa mid jabinaysa sharcigii ganacsiga xorta ahaa, waxayna ka soo horjeeda tartankii loogu tallo galay ganacsiga.” Ayuu yidhi wasiirka ganacsigu.
Wasiirka Ganacsiga Somaliland Cabdirisaaq Kahliif Axmed ayaa ku eedeeyay ganacsatada dalka in ay yihiin kuwo aan eegin in ay bulshada dib wax ugu celiyaan bal se ay ishoodu qabato marka ay wax kordhiyaan, waxaanu weyn u sharxay inaanay jirin sabab uu shidaalku u kaco, maadaama oo qiimaha la kordhiyay iyo qiimaha shidaal ahaan kordhay aanay ahayn wax isu dhigma.
Waxaanu Wasiirku ku tilmaamay qaybo ka mid ah Ganacsatada waddanka, kuwo eega oo qudha marka ay wax kordhinayaan, iyagoo marka ay wax jabaan ummadda aan hoos waxba uga dhigin ee halkii uun ku sii haya.
Isaga oo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi “Ganacsatadu ma aha kuwo eega marka wax is dhimaan oo bulshada dib uga celiya wixii ay ku qaligareyeen, waxa kaliya oo ay ishoodu qabataa markay wax kordhinayaan, waxaa hore u dhacday intii ay Xukuumaddu jirtay in shidaalku kaco, iyadoo labo sanno gudahood uu shidaalku gaadhay 205$, waxaanu samaynay tartan sherkadaha ah, taas oo keentay inuu jabo, isagoo hoos ugu soo noqday 163$. Ganacsatadu wax ay jabisay ama hoos u dhigtay maydhicin, runtii waxay taasi ku cadaynaysaa inay yartahay intay ummadda u naxayaan”.
Previous Post“Dastuurka markii loo baahdaba waa la furayaa, maaha kitaab quraan ah”Next PostXukuumadda Somaliland Oo Si Adag u Durtay Qaraarkii G/Ammaanka Q.Midoobay	Blog